DIY: बिग्रिएको कपालको लागि केरा र चामलको बाटा कपाल मास्क - PAMPEREDPEOPLENY.COM - सुन्दरता
DIY: बिग्रिएको कपालको लागि केरा र चामलको बाटा कपाल मास्क
घर सुन्दरता कपाल को स्याहार कपाल हेरचाह लेखन-लेखका द्वारा रिमा चौधरी २१ फेब्रुअरी, २०१ on मा
किनभने गर्मी को आसपास छ, तपाइँको कपाल हानिकारक यूवी किरण को कारण शुष्क र भंगुर हुन सक्छ। बिग्रिएको कपालले सामान्यतया अत्यधिक कपाल झर्ने, डन्ड्रफ मुद्दाहरू, विभाजन टु ,्गो, भंगुर कपाल र बलिरहेको कपालको समस्या निम्त्याउन सक्छ
दुःखको कुरा, हाम्रो कपाल केवल वातावरणीय कारकको कारणले मात्र होइन तर हामीले कपाल धुने गल्तीहरूद्वारा पनि असर गर्न सक्छ। धेरै स्टाइलिंग उपकरणहरू प्रयोग गर्ने महिलामा सुख्खा र बिग्रिएको कपालको साझा गुनासो छ।
ठिक छ, यदि तपाईं पनि सुक्खा र बिग्रिएको कपालको साथ स .्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ भने, यहाँ एक सरल DIY हेयर मास्क नुस्खा हो जुन तपाईंको स्क्याल्प र ट्रेसलाई पोषण दिन मद्दत गर्दछ। पढिरहनुहोस्!
यो पनि पढ्नुहोस्: यी कमाल नरिवल कपाल तेल मास्कको साथ आफ्नो कपाल अवस्था
सामग्रीहरू तपाइँले आवाश्यक हुन्छ
बच्चा छोरीको जन्मको लागि शुभकामना
केराको केही टुक्रा
२-२ चम्चा मह
चामलको पीठो 5--8 चम्चा
१) एउटा केरा लिनुहोस् र यसलाई केही टुक्राहरूमा काट्नुहोस्। तपाईंलाई लगभग approximately-। टुक्रा केरा चाहिन्छ।
२) अब २- 2-3 चम्मच मह थप्नुहोस् र राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस्।
कसरी मेरो अनुहारमा बल्खा चिह्न हटाउने
)) मिश्रणमा धानको पीठो थप्नुहोस्।
)) राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस् र निश्चित गर्नुहोस् कि कुनै गांठ बनिएको छैन।
)) यदि आवश्यक छ भने, तपाईले ब्लेन्डरमा सामग्री मिश्रण गर्न सक्नुहुनेछ एउटा मिठो सुसंगतता प्राप्त गर्न।
कसरी घर मा varalakshmi पूजा तयारी गर्ने
)) यसलाई तपाईंको स्क्याल्पमा लागू गर्नुहोस् र स्नान क्याप लगाउनुहोस्।
)) २० मिनेट कुर्नुहोस् र चिसो पानीले धुनुहोस्।
केराको फाइदा ice चामलको बाटा कपाल मास्क
केरा र चामलको पिठो कपालको मास्क तपाईंको स्क्याल्प र कपालको लागि अत्यन्त राम्रो हो। यसले तेश्रो र कपालको जरालाई पोषण दिन मद्दत गर्दछ। केराले तपाईंको टाउकोको छाला र कपाल हाइड्रेट राख्न मद्दत गर्दछ र कपाल खण्डबाट बचाउँछ। हप्तामा दुई पटक यो कपालको मास्क प्रयोग गर्नाले सुक्खा, सुस्त र बिग्रिएको कपालको उपचार गर्न मद्दत गर्दछ।
यो पनि पढ्नुहोस्: तपाईको छालाबाट विष हटाउन यी हर्बल मास्कहरू जाँच गर्नुहोस्!
कसरी माथिल्लो ओठबाट ट्यान हटाउने
कपालमा केराको फाइदा
केरामा पाइने आवश्यक पोषक तत्त्वहरूको कारणले यसले तपाईंको कपाललाई नोक्सानबाट जोगाउन मद्दत गर्दछ।
यसले स्क्याल्पमा डन्ड्रफलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ।
केराले नमीलाई लक गर्न मद्दत गर्दछ, यसले तपाईंलाई नरम ताडहरू दिन्छ।
यो एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजरको रूपमा काम गर्दछ जसले तपाईंको स्क्याल्प र कपाललाई हाइड्रेट गर्न र मॉइस्चराइज गर्न मद्दत गर्दछ।
यसले कपाल झर्ने बिरूद्ध लड्न मद्दत गर्दछ यसमा प्रशस्त पोटेशियम सामग्रीको उपस्थितिको कारण।
केरा पल्पमा भिटामिन सी र एको कारणले यसले सुक्खा र बिग्रिएको कपाल मर्मत गर्न मद्दत गर्दछ।
चामलको कपालमा कपालमा फाइदा
चामलको पीठोमा राम्रो मात्रामा एन्टिऑक्सिडन्टहरू भएको कारणले यसले तपाईंको कपालको संरचना यूवी किरणबाट बचाउन मद्दत गर्दछ।
यो एक उत्कृष्ट exfoliating एजेन्ट को रूप मा काम गर्दछ कि खोपडीबाट रासायनिक निर्माण अप हटाउन मद्दत गर्दछ।
यो डन्ड्रफ फ्ल्याक्स सजिलैसँग हटाउनका लागि एक उत्कृष्ट एजेन्ट साबित हुन्छ।
यदि तपाईंसँग संयोजन कपाल छ भने, चामलको पीठो उपयुक्त सामग्री हो जुन उपयुक्त हुन्छ।
नोट: सामग्री पूर्ण रूपले मिश्रण गर्न निश्चित गर्नुहोस् र यसलाई ठोकर नराख्नुहोस्, जसले गर्दा यसलाई स्क्याल्पमा राम्रोसँग फैलिन दिनुहोस्।
कुन हिन्दु ईश्वरको मुनि म जन्मिएको छु
कुरा केटाहरू आफ्नो गर्लफ्रेंडबाट सुन्न चाहन्छन्
निष्पक्षताका लागि वाइन कसरी प्रयोग गर्ने
Multti mitti खाने साइड इफेक्ट
मनीष मल्होत्रा ​​लेहेंगामा मिरजा
कसरी तपाईको कपालमा अण्डा राख्ने